Ungazitshintsha njani iipompo zasekhitshini?
Ikhaya / Blog / Ungazitshintsha njani iifompo zasekhitshini?
2020 / 11 / 09 uhleloBlog 1325 0
Nokuba uthatha indawo okanye ufaka itepu yasekhitshini, kuya kufuneka uhambe phantse kwinkqubo enye. Nangona ukufaka itepu ekhitshini kulula ngandlela thile kunokuyitshintsha. Kodwa, ukubuyisela itepu yasekhitshini nako akukho nzima ukuba uyabazi ubuchwephesha.
Ukubonakala okwangoku, kuya kufuneka utshintshe izinto zakho zasekhitshini ngokwendlela. Yiloo nto abantu abayenzayo kule mihla. Ikhampasi yasekhitshini ikwakhona okunokuhlaziywa kunye nokuhlala ixesha elide okubalulekileyo kwikhitshi. Ngokukodwa itephu yomxhubi ngesaphulelo ehlala phantse iminyaka emi-5 ukuya kweli-10.
Ngoku, ungayitshintsha njani itepu yakho ngombane omtsha omnyama wehle umpompo wasekhitshini? Kule nqaku, senze isikhokelo esifanelekileyo sokutshintsha ipompo yakho yakudala yasekhitshini. Masiqale nje!
Ungayitshintsha njani itepu yasekhitshini ngesitshizi
Ukutshintsha ipompo yinto ebalulekileyo yokuphucula ikhaya. Kuqhelekile kodwa kunzima kubasebenzisi abaninzi basekhitshini, ngakumbi kwabo bangenamava. Inyani yile, ukufaka endaweni emnyama matte ukutsala umpompo wasekhitshini akukho nzima njengoko kubonakala ngathi.
Masikukhokele kwinkqubo yokutshintsha ipompo yasekhitshini ngesitshizi.
Inyathelo 1: Thatha amalungiselelo
Impompo emibini okanye emithathu enemingxuma ayinakusebenza kwisinki yomngxunya omnye. Kodwa, itepu yomngxunya omnye isebenza ngokugqwesileyo kwisinki enemingxunya emibini. Ngaphambi kofakelo, yiya ngaphantsi kwesinki yakho kwaye ujonge ukuba mingaphi imingxunya ekhoyo. Yizisa itepu yekhitshi esekwe kumngxunya wokuntywila kwakho.
Inyathelo 2: Cima ubonelelo lwamanzi
Kuya kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi itompu oza kuyifaka? Ngoku cima ubonelelo lwamanzi kwiivalvu eziphantsi kwesinki. Ukuba akukho zivalo zikhona, kufuneka uvale onke amanzi endlu.
Inyathelo 3: Khubaza imigca yokuhambisa amanzi.
Ukuyekisa imigca yokuhambisa amanzi kwimpompo ngokusebenzisa utsalo olungelelanisiweyo. Iya kukuhlangula kuxinzelelo lwamanzi ngelixa uthatha indawo yombhobho. Xa ukhulula imigca yokubonelela, uzinzise imibhobho yesinki phantsi kwekhabhinethi.
Eli nyathelo liya kususa konke ukuphazamiseka kwindlela yokuhambisa amanzi. Ngenxa yoko, amanzi anokuhamba ngokulula kumgca wokubonelela.
Inyathelo 4: Khulula amandongomane esinki ukususa itompu
Lixesha lokususa itepu yakho endala. Ke, khulula amandongomane ekhitshini lakho lokuntywila phantsi kwekhabinethi ngesiwutshi. Ngoku, phakamisa ngokuthe ngcembe itompu yakho yakudala kunxibelelwano lwesinki. Emva koko coca ijunk kunye nokungcola kumphezulu wesitya sakho.
Inyathelo 5: Hlanganisa iziqwenga zompompo
Hlanganisa iziqwenga zompompo kunye nenqaku lokudibanisa isinki yekhitshi. Landela imiyalelo kwiphakheji. Nokuba yimpompo ephatha isibambo esinye okanye iimpompo zokubamba ezimbini, imiyalelo engaphezulu kwiphakheji iya kukubonisa icala elifanelekileyo lokuyibeka.
Inyathelo 6: Faka itepu emngxunyeni wesinki
Emva kokuncamathisela amaqhekeza ompompo nezihlanganisi, qinisa uqhagamshelo kwisitshixo esihlengahlengiswayo. Emva koko, faka itompu ngokuchanekileyo emngxunyeni wesinki.
Yongeza isitshizi ngomlomo kwitepu yekhitshi. Qinisa isitshizi ngepompo kunye netompu enendawo efakiweyo yesinki.
Inyathelo 7: Qhagamshela kwakhona umgca wokuhambisa amanzi.
Okokugqibela, uyifakile itepu yasekhitshini kwisinki yakho. Ngoku lixesha lokudibanisa umgca wokuhambisa amanzi. Qhagamshela umgca wokuhambisa amanzi ngesitshixo esihlengahlengiswayo kwaye uvule unikezelo lwamanzi.
Inyathelo 8: Jonga ukuvuza kunye noxinzelelo lwamanzi
Kuya kufuneka usebenzise itepu ngokukhawuleza emva kofakelo kwaye ujonge ukuba akukho ukuvuza na. Qinisa isikulufu sokudibanisa ukuba kukho ukuvuza okanye nakuphi na ukuphazamiseka kunikezelo lwamanzi.
Khumbula, ukujonga itompu emva kofakelo lukhetho kodwa kubalulekile ukwenza.
Inyathelo 9: Coca isinki
Emva kokutshintsha itompu, uya kufumana ubutyobo esinkini. Coca isinki ngaphambi kokusebenzisa itompu.
Ngaba kunzima kakhulu ukubuyisela itompu ekhitshini lakho? Hayi? Emva koko ulinde ntoni? Landela nje izikhokelo zethu kwaye ubeke endaweni yakudala itepu yekhitshi lakho ngaphandle koncedo.
Nokuba uyapheka okanye uhlamba izinto zasekhitshini, kufuneka ube nompompo onamandla wasekhitshini. Umbhobho onamandla wasekhitshini ngumbhobho onika ukuhamba kwamanzi okuphezulu. Impompo endala ekhitshini ayinako ukuhambisa amanzi.
Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ubeke endaweni yakho endala itepu yekhitshi kunye nezintsha. Ukufumana itepu yekhitshi ehamba phambili, sicebisa ukuba ukhethe itephu yomxhubi enesaphulelo. Ngoba? Kungenxa yokuba, yenye yeepompo zamandla ekhitshi eza nenkqubo yokufaka ngokulula. Ngethemba, izikhokelo zethu ziya kukukhokelela endaweni yompompo wakho omdala ngaphandle kwempazamo.
Buyisela itompu yakho yakudala yokupheka kunye nokupheka kokonwaba.
Ngaphambili :: Kutheni i-Faucet yaseKhitshini eyiyo yenza umahluko